मेदुसा, टाउकोमा साँपहरु संग एक Absolut यात्रा
दानियल | | ग्रीस
मछली उनी ग्रीक पौराणिक कथाको सबैभन्दा प्रसिद्ध र सबैभन्दा मनमोहक व्यक्तित्व हुन्। थियो तीन गोर्गन मध्ये एक, Stheno र Euryale संग, अमर थिएन कि तीन भयानक बहिनीहरू मध्ये एक मात्र।
गार्गनहरू को थिए? यी राक्षसी प्राणीहरू जुन युनानीहरूले पुरानो समयमा डराउँथे, पखेटा महिलाहरू थिए उनीहरूको टाउकोमा कपालको सट्टा जीवित सर्पहरू थिए। यद्यपि यो उनीहरूको डराउने कुरा थिएन। सबैभन्दा खराब कुरा त्यो थियो, दन्त्यकथाका अनुसार, आँखामा हेर्ने आँट गर्नेहरू तुरून्त ढु stone्गामा परिणत भए।
2 पर्सियस र मेदुसा
यी प्राणीहरूले त्यतिबेलाका युनानीहरूमा प्रेरणा पाएको हुनुपर्छ भन्ने डरको कल्पना गर्न सजिलो छ, जसले ती सबै पुरानो मिथकहरूलाई निश्चित रूपमा लिए। जे भए पनि, गोर्गनहरू टाढाको ठाउँमा बस्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउँदा यो एकदमै ढुक्क भएको हुनुपर्छ। खुल्ला टाढा टापु सर्पेडोनकेही परम्परा अनुसार; वा, अन्य अनुसार, कहीं हराएको लिबिया (जसलाई ग्रीकहरूले अफ्रिकी महादेश भन्छन्)।
गोर्गनहरू हुन् फोर्सिस र केटोका छोरीहरू, जटिल ग्रीक थियोगनी भित्र दुई आदिम Divinities।
तीन बहिनीहरू (स्टेनो, युरीयाल र मेदुसा) ले गर्जोनसको नाम पाए, जुन “भयानक” हो। यो उनीहरूको बारेमा भनिएको थियो उसको रगतमा मरेकाहरूलाई फेरि जीवित पार्ने शक्ति थियो, जबसम्म यो दायाँ तर्फबाट निकालेको थियो। यसको सट्टा, एक gorgon को बायाँ तिर रगत एक घातक विष थियो।
१us1640० मा जियान लोरेन्जो बर्निनी द्वारा मेडुसाको बस्ट मूर्तिकला। यस भव्य बार्क मूर्तिलाई रोमको क्यापिटोलिन संग्रहालयहरूमा राखिएको छ।
विशेष गरी बोल्दै मछली, यो भन्नु पर्दछ कि यसको नाम पुरानो ग्रीक शब्दबाट आएको हो meaning जसको अर्थ "अभिभावक" हो।
त्यहाँ एक लेस्ट लिजेन्ड छ कि मेडूसाको लागि अन्य उत्पत्तिलाई अन्य दुई गोर्गनहरूको भन्दा भिन्न उत्पत्ति प्रदान गर्दछ। यस अनुसार, मेदुसा एक सुन्दर युवती थिई जोसँग देवी एथेना अपमानित उनलाई पवित्र गरिएको एक मन्दिरको अपवित्र पार्नु (रोमन लेखक ओभिडका अनुसार उनले देवतासँग यौन सम्बन्ध राखेका थिए) Poseidon अभयारण्यमा)। यो गम्भीर र करुणाविना हुने थियो दण्डको रूपमा उनको कपाललाई सर्पमा रूपान्तरण गरियो.
मेदुसाको मिथकले धेरैलाई अभिनय गर्यो कलाको काम गर्दछ नवजागरणबाट १ th औं शताब्दी। सायद सबै भन्दा प्रसिद्ध छ Caravaggio द्वारा तेल चित्र, १ 1597 XNUMX in मा चित्रित, चित्रमा देखाइएको एउटा जुन पोष्टलाई हेड गर्दछ। हालसालैका समयमा, मेदुसाको तथ्यांकलाई महिला विद्रोहको प्रतीकको रूपमा नारीवादका केही क्षेत्रहरूले दावी गरेका छन।
पर्सियस र मेदुसा
ग्रीक पौराणिक कथामा, मेदुसा नाम जोडदार रूपमा जोडिएको छ Perseus, राक्षस स्लेयर र Mycenae शहर को संस्थापक। नायक जसले आफ्नो जीवन समाप्त गरे।
Danae, पर्सियसकी आमा, द्वारा दावी गरिएको थियो Polydectes, सेरिफोस टापुको राजा। जे होस्, जवान नायक उनीहरूको बीचमा उभिए। पोलिटेकेट्सले यस कष्टकर अवरोधबाट छुटकारा पाउन एउटा पर्सन भेट्टायो जहाँ पर्सियसलाई एक मिशनमा पठाईएको थियो जहाँबाट कोही पनि जीवित फर्किन सक्दैन: सर्पेडोन र मेदुसाको टाउको ल्याउनुहोस्, मात्र नश्वर gorgon।
एथेना, अझै पनि मेदुसा द्वारा पीडित, आफ्नो जटिल प्रयासमा पर्ससलाई मद्दत गर्ने निर्णय गरे। त्यसकारण उनले उनलाई हेस्परइड्सलाई खोज्ने र उनीहरूबाट हतियारहरू लिनको लागि सल्लाह दिए। ती हतियारहरू ए हीरा तरवार र हेलमेट जुन उनले यो राखेपछि दिए अदृश्यताको शक्ति। उनले तिनीहरूबाट मेडुसाको टाउको सुरक्षित रूपमा राख्न सक्ने झोला पनि प्राप्त गरे। अरु के छ त, हेमीज पर्सियस उसको पखेटाको जुत्ता उडानको लागि, जबकि एथेना आफैंले उनीसँग धनी थिइन् एक ठूलो दर्पण पॉलिश ढाल।
पर्सीस मेदुसाको टुक्रिएको टाउको समात्दै। सेलिनी मूर्तिकलाको विवरण, फ्लोरेन्सको पियाजा डे ला सिग्नोरियामा।
यो शक्तिशाली Panoply संग सशस्त्र, पर्सियस gorgons भेट्न मार्च। भाग्य मा यो हुनेछ, उनले मेदुसा उनको गुफामा सुतिरहेको पाए। उनको आँखाबाट जोगिनको लागि जुन तपाईंलाई आशाविहीन डरले छोडिनेछ, नायकले शिल्ड प्रयोग गर्‍यो जुन ऐना जस्ता गोर्गनको छवि प्रतिबिम्बित गर्दछ। यस प्रकार उसले अनुहारमा नहेर्नु भन्दा उनको अघि बढ्न सक्षम भयो र उनको शिर काट्यो। काटिएको घाँटीबाट पखेडाको घोडा पेगासस र क्रिससोर नामको राक्षस जन्म भएको थियो।
के भएको थियो भन्ने थाहा पाएपछि, अन्य गोर्गनहरू उनीहरूको बहिनीको हत्यारालाई पछ्याउन निस्के। त्यस पछि पर्सियसले आफ्नो अदृश्यताको हेलमेट उनीहरूबाट भाग्न र सुरक्षाको लागि प्रयोग गरे।
मेदुसाको टुक्रिएको टाउकोको प्रतीकको रूपमा चिनिन्छ गोर्गोनियन, जुन एथेनाको ढालमा धेरै प्रतिनिधित्वहरूमा देखा पर्दछ। पुरातन ग्रीकहरूले खराब भाग्य र नराम्रा आँखालाई हटाउन मेदुसाको टाउकोको ताबीज र मूर्तिकलाहरू प्रयोग गर्थे। पहिले नै हेलेनिस्टिक समयमा, गोर्गोनियन मोज़ेक, चित्रकला, गहना र सिक्कामा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको छवि भयो।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » मेदुसा, टाउकोमा सर्पको साथ एक
ट्यूडर गुलाब, इ England्ल्यान्डको राष्ट्रिय फूल